फिदा हुसेनको गोली हानी हत्या गर्नेहरु सार्वजनिक
प्रकाशित मितिः पुष २६, २०७५
३३६४ पटक पढिएको
इटहरी । सुनसरी दुहबीका फिदा हुसेनको गोली हानी हत्या गर्नेहरुलाई सुनसरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएकाहरुमा सुनसरीका छाताबेलीका २८ बर्षिय सकिम हुसेन, सोही ठाँउ बस्ने ३१ बर्षिय जाबिर हुसेन, दुहबी १२ सितापुरका ६० बर्षिय बिसम्बर यादव र दुहबी ९ का जफार मिया रहेका छन् ।
उनिहरुको साथबाट एक थान कटुवा पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने एक राउण्ड गोली समेत बरामद गरेका छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी इनरुवामा उनिहरुलाई सार्वजनिक गदै हुसेनको हत्या आपसी रिसिबीको कारण भएको प्रहरीले बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुनसरीका एसपी राजन अधिकारीले घटनाको बिषयमा अनुसन्धान अझै जारी रहेको बताए । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो र १ नंम्बर प्रदेशको बिशेष टोली उनिहरुलाई घटना भएको ढेड महिना पछि पक्राउ गरेको हो ।
एक जनालाई नेपालगंञ्ज, दुई जना भारत र एक जनालाई दुहबीबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एक जनालाई भने सार्वजनिक गरिएन ।
कहिल्यै धन सम्पतिको कमी हुन न .....
के हो सेक्स क्यालेण्डर ? कस .....
काग्रेसको इटहरीमा गर्ने भनिएक .....
रिनाको हत्यारा पत्ता लगाउँन प् .....
वीरगन्जमा एकैपटक चार वटा बच्चा .....
सह अस्तित्वको खोजिमा भौतारिदै .....
कहिल्यै धन सम्पतिको ...
के हो सेक्स क्याले ...
काग्रेसको इटहरीमा ग ...
रिनाको हत्यारा पत्ता ...
वीरगन्जमा एकैपटक चार ...
सह अस्तित्वको खोजिमा ...
शेयर बजारमा झिनो सुध ...
शृङ्खलाले आसु झार्दै ...
प्रितम आचार्यले भने ...
इटहरीलाई प्रदेशको रा ...
ब्वाईफेण्डले हत्या ग ...
एकै परिवारका ६ जना द ...
कलाकार प्रज्ञा जोशील ...
आइतबार बिहानै पत्रका ...
Tweets by SancharPati
सूचना विभाग दर्ता नं. N/A
मोबाइल नं.: ९८५२०५७५३१
Copyright © 2018 / 2019 - Sancharpati.com All rights reserved